10 Khaladaadka Safarka ee Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Khaladaadka Safarka ee Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Yurub
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo(Last Updated On: 13/11/2020)
Haddii aad qorsheyneyso safarkaaga ugu horreeya ee Yurub, waxaa jira waxyaabo yar oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato inta ugu badan magaalo qurux badan dunida oo dhan. waxaan u qaabeynay hagaha ugu fiican ee 10 khaladaadka safarka waa inaad ka fogaataa Yurub. Safar dhulka dhufaysyada, cunnooyinka wanaagsan, jardiinooyinka qaranka, iyo tuulooyin qurux badan, noqon kartaa mid ka mid ah fasaxyada ugu xusuusta badan ee aad heli doontid. Taas lidkeeda, waxay waliba isu rogi kartaa halyeey shar leh oo leh dhamaad xumo, haddii aadan si fiican u diyaarsaneyn.
Haddii aad u safreyso Yurub markii ugu horreysay ama soo noqosho, talooyinkani waxay safarkaaga ka dhigayaan mid ugu ammaansan, ugu raaxo badan, iyo hubaal epic.
1. Ma Booqan Doono Magaalooyinka Yaryar Iyo Meelaha Ka Baxsan-Jidadka
Haddii ay tahay safarkaagii ugu horreeyay ee Yurub, markaa hubaal waxaad u socotaa meelaha qof walba ka hadlayo. Si kastaba ha ahaatee, hadaad rabto inaad ogaato Yurub qaas ah, then not visiting small villages and known cities are one of the travel mistakes to avoid in Europe. You should plan your trip to the most unforgettable off the beaten path places in Europe.
Dabcan, hadaad rabto inaad aragto isla markaana aad leedahay sawiro la mid ah malaayiinta kale ee dalxiisayaasha ah ee isugu soo baxay waddooyinka Paris, Milan, iyo Prague, ka dib raac dadka. laakiin, hadaad leedahay nafta sahamisa, oo raadinaya dhagaxyadaas qarsoon, ka dibna qorshee safarkaaga tuulooyinka yaryar iyo kuwa gaarka ah ee Yurub.
2. Khaladaadka Safarka ee Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Yurub: Ma Isticmaalayo Gaadiidka Dadweynaha
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee maskaxdaada ku soo dhaca markaad maqasho gaadiidka dadweynaha, waa basas cufan oo kulul, safafka, iyo taraafikada. Si kastaba ha ahaatee, gaadiidka dadweynaha ee Yurub maahan basaska oo keliya laakiin taraamyada iyo tareennada. Dalxiisayaasha qaar waxay doorbidayaan gaari, ka dib safar, laakiin gaadiidka dadweynaha ee Yurub waa mid aad u raaxo badan, waqtiga ilaaliya, cheap, waana lagula taliyay.
Waxaad si sahal ah ku gaari kartaa qeybaha ugu fog Yurub, keyd dabiici ah oo layaableh, Daar wayn, iyo views breathtaking, tareen. Ma jiro hab ka fiican oo lagu safro Yurub marka loo eego tareen, waa waqtiga iyo lacagta badbaadinaysa.
3. Mahelayo Caymiska Safarka
Haa, magaalooyinka Yurub waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu horumarsan uguna amniga badan adduunka. laakiin, wali dad ayaad tahay, iyo buuraha ku yaal jardiinooyinka qaran ee Yurub waa kuwo dhaadheer oo aan naxariis lahayn. Intaad noqon kartid qofka ugu khibrada badan uguna safarka badan, wali hargab ayaa kugu dhici kara, canqowga leexo, ama kamaradaada la xaday.
Caymiska safarka ee Yurub wuxuu muhiim u yahay caafimaadka iyo sababaha kale ee safarka. Helitaanka caymiska safarka Yurub gudaheeda waa waajib, waana inaadan ku badbaadin baahidaas oo kale. Inaadan helin caymiska safarka waa khalad ay tahay inaad iska ilaaliso markaad u safreyso Yurub maxaa yeelay waxay kugu kacaysaa qiimo yar.
4. Khaladaadka Safarka ee Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Yurub: Ma Iibsanayo Tigidhada Hormarka
Yurub waa qaali. Xitaa haddii aad u safreyso meelaha ugu jaban, matxafyada iyo tigidhada soo jiidashada waxay kugu kacaysaa qiimo yar. Inaadan tikidhada horay u sii iibsan waa mid ka mid ah khaladaadka ugu waa weyn ee laga fogaado Yurub, malaayiinta dalxiisayaasha ah ee booqda Yurub sanad walba, taas ayaa kuu damaanad qaadi doonta.
Sidaas, waxaad ka heli kartaa heshiisyo waaweyn bogagga caanka ah ee Yurub, soo jiidashada, iyo hawlaha, hadaad cilmi baaris ku sameyso oo aad horey u sii qabsato. Mararka qaarkood waxaad ku heli kartaa heshiisyo aad u fiican runtii tikidhada ku iibsashada khadka tooska ah, waxayna kaa badbaadinaysaa waqti aad u qaali ah safarkaaga. Intaa waxaa dheer, haddii ay tahay safarkaagii ugu horreeyay ee Yurub, waa inaad u diyaar garowdaa safafka dhaadheer. Sidaas, iibsashada tikidhada safarka iyo soo jiidashada khadka tooska ah waxay kaa badbaadin doontaa inaad istaagto roobka da'aya, maalmaha xagaaga kulul, wuuna kuu daayaa waqtigaas aragti iyo picnic.
5. Lacag Isku Bedelka Madaarka
U safridda waddan shisheeye waxay noqon kartaa walaac, Inaad ku hadashid luuqada ama aad raadiso magaalada. Maareynta miisaaniyaddaada iyo lacagta qalaad sidoo kale waxay noqon kartaa mid walaac badan. In kasta oo lacag lagu kala beddelayo garoonka diyaaradaha waa mid aad u deggan oo lagu kalsoonaan karo, waa mid kamid ah khaladaadka safarka ee looga fogaado Yurub.
Khidmadaha aad bixinta iyo sarrifka lacagta ayaa kugu kici doonta, sidaa darteed waxa fiican inaad ku samayso cilmi-baaristaada internetka on edhibcaha dhibcaha. Sidoo kale, waxaad had iyo jeer weydiin kartaa soo dhaweynta hoteelkaaga, way ku farxi doonaan inay kugula taliyaan dhibco lacag lagu kalsoonaan karo deegaanka. Waxaa lagugula talinayaa inaad is weydaarsato ku filan safarka garoonka diyaaradaha, iyo qaddar dabooli doona kan ugu horreeya 1-2 maalmood safarkaaga.
6. Booqashada Deganaanshaha Xaafada Qaldan
Goobtu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan abuurista fasaxii ugu fiicnaa in Europe. Ma sameyneyso cilmi baaristaada qeybta ugu fiican magaalada, xaafad, ama tuulo lagu nagaado, waa qalad in laga fogaado marka la safrayo Yurub. Doorashada goobta hoygaaga ayaa muhiim u ah xulashada nooca hoyga. Joogitaanka qaybta khaldan ee magaalada ayaa kugu kici doonta waqtiga safarka, gaadiidka, qiimo, iyo amniga.
7. Khaladaadka Safarka ee Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Yurub: Cunitaanka Makhaayada Koowaad ee Aad Aragto
Hadaad tahay dalxiis caadi ah, ka dib waxaad u aadi doontaa silsiladaha caanka ah ee caanka ah ee qadada ama makhaayada ugu horraysa ee aad ku socoto. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad maqnaato maqaayadaha cajiibka ah, suxuunta maxaliga ah ee cajiibka ah iyo aragtiyaha kaa qaadaya neeftaada.
Hadaad waqti uun u hurto baaritaanka safarkaaga kahor, waxaad naftaada kula dhaqmi doontaa khibrad cunto karis ah oo aan la ilaawi karin. Ka sokow, si ay u isku dayaya cunto macaan, waxaad badbaadin kartaa xoogaa yar, halkii aad ku kala bili lahayd maqaayada ugu horeysa. Kafee weyn, cajiin, cunnada deegaanka, iyo saxamada xiisaha leh ee qosolka leh, waxay noqon kartaa hareeraha geeska.
Naples ilaa Qiimaha Tareenka Rome
Florence ilaa Qiimaha Tareenka Pisa
Rome ilaa Qiimaha Tareenka Venice
8. Ku Adkaysta Buug-tilmaame halkii aad ka ahaan lahayd Safarro Socdaal Bilaash ah
Buug tilmaame waa ilaha weyn ee dhiirigelinta safarka Yurub, iyo inaad yeelato qorshe safar guud. Si kastaba ha ahaatee, ku dhaganaanta buug-tilmaameedkaagu waa mid ka mid ah khaladaadka safarka ee ugu weyn ee laga fogaado Yurub. Waxay ka dhigan tahay inaad booqan doontid isla meelaha malaayiin dalxiisayaal kale ah, iyo sida dalxiis.
Ogaanshaha magaalada on a safar socod bilaash ah waa habka ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub. Tilmaamaha Ingiriisiga ku hadla ee deegaanka ayaa kugu wareejin doona magaalada. Marka lagu daro muujinta boggag caan ah oo caan ah, hagaha socdaalka magaalada ayaa kuu sheegi doona waxyaalaha qarsoon ee magaalada lagu xafido waxayna ku siin doontaa xamuul badan oo talooyin iyo tilmaamo magaalada ah. Tani waxaa ka mid ah talooyinka cuntada, heshiisyo waaweyn, dhibco qarsoon, iyo tan ugu muhiimsan sida amaan loo ahaado.
AQiimaha Amsterdam ee London
9. Khaladaadka Safarka ee Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Yurub: Aan U Xidhmin Yurub
Qoraxdu, roobaadka, qabow, ama qoyan, mid ka mid ah waxyaabaha ugu khaaska ah ee ku saabsan Yurub waa inaad la kulmi karto dhammaan 4 xilliyada maalintii. Sidaas, inaadan khaas u xirxirin cimilada Yurub waa qalad safar si looga fogaado qiimo kasta.
Funaanado, jaakad roob iyo dabayl, kabo raaxo leh ayaa si fudud lagama maarmaan u ah in la raaco safarkaaga Yurub. Waxaa fiican inaad xirxirato oo aad xirato lakabyo, sidan ayaad ku raaxeysan doontaa cimilo kasta, mana qaadi doono dhammaan dharka dharka.
Qiimaha Tareenka Munich ilaa Zurich
Qiimaha Tareenka ee Berlin ilaa Zurich
Qiimaha Tareenka ee Vienna ilaa Zurich
10. Kaydinta Lacagtaada Hal Meel
Magaalooyinka yurub waxay caan ku yihiin qurux badan, laakiin sidoo kale loogu talagalay jeebka jeebka lagu shubto, dabin dalxiis, iyo qorshayaal kala duwan oo lagu khiyaaneeyo dalxiisayaasha. Quusitaanka miisaaniyada safarkaaga inta udhaxeysa safarkaaga maalinlaha ah boorso, ammaan, iyo kaarka amaahdu waa habka ugu fiican ee nabadgelyo loogu safro oo loogu raaxeysto.
Waxaa ugufiican inaad kusii sugnaato dhanka amaanka oo aad iska ilaaliso inaad lacagtaada iyo kaarkaaga deynta hal meel ku dhigato. Sidaas, haysashada waxaaga qaaliga ah ee kugu saaran markasta iyo goob kasta, waa qalad safar waa inaad ka fogaataa Yurub.
Si aad u soo gabagabeyn, waxaa jira meelo badan oo cajiib ah in laga ogaado Yurub. Waad ku qarashgareyn kartaa dhammaadka usbuuca ama qorsheyn kartaa safar dheer oo Euro ah, fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn. laakiin, markaad u safreyso dal shisheeye, sharciyada ciyaarta way ku kala duwan yihiin magaalo ilaa magaalo. Waxa kaliya ee wali isku mid ah ayaa ah qaladaadka dalxiisayaashu u galaan safar kasta. Naga 10 khaladaadka safarka si looga fogaado Yurub, ku ilaalin doona amaankaaga oo safarkaaga ka dhigi doonaa mid dhab ah mid gaar ah.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kaa caawino qorsheynta fasaxaaga Yurub ee aad dooratay tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada "10 Khaladaadka Safarka ee ay tahay inaad ka fogaato Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/travel-mistakes-avoid-europe/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, waxaadna u badali kartaa / pl / tr ama / de iyo luqado badan.
#traveleurope Europetips tareen safarka TravelMistakes traveltips